သူအရင်က ကျွန်မကို သိပ်ချစ်တာ …. – Shinyoon
အရင်ကတော့ သူကျွန်မကို သိပ်ချစ်တယ် .. အစစအရာဂရုတစိုက်ရှိတတ်သလို စကားလုံးတိုင်းဟာလဲ ချိုသာတတ်တယ် သိပ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မသူ့ကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် ကျွန်မ ဘေးနားတစ်သက်လုံး ရှိနေဖို့ရွေးခဲ့တာပါ …
ချစ်သူဘဝကမှ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းရင် အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာလဲ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့စကားတွေကို ကျွန်မ လက်ခံခဲ့ပေမယ့်လဲ ချစ်သူဘဝမှာကောင်းရင် အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာလဲကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ အတွေးတွေ မှားမှန်းသိလာခဲ့တယ်
ဆေးလိပ်အရက်ကွမ်း အကုန်ကင်းခဲ့တဲ့သူမှာ ကျွန်မတို့လက်ထပ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ အရက်တွေသောက်တတ်လာသလို ကျွန်မကိုလဲ အရွဲ့တွေတိုက်တတ်လာတယ် ဘာကြောင့်လဲမေးရင် အဖြေမရှိတွေ ရှိမနေခဲ့ဘူး ကျွန်မတို့က ချစ်လို့ယူခဲ့ကြတာလေ
ဒါပေမယ့်လဲ အသံမာမာတောင် မပြောတတ်ခဲ့တဲ့သူဟာ ခုဆိုလက်နဲ့လဲ ရွယ်တတ်နေပြီဖြစ်သလို ကိုယ် မကြိုက်တာကို ရှောင်ခဲ့တဲ့သူဟာ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေကို ပိုလုပ်တတ်လာပြီ အရင်က ကျွန်မကို သိပ်ချစ်ဖူးတယ်ဆိုတာ သူမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တွေးနေမိတယ်
အရင်က သူကျွန်မကို သိပ်ချစ်ဖူးတာ … ပြဿနာတွေမရှိပါပဲနဲ့ တခြားတစ်ယောက်လို ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကျွန်မ အဖြေတွေရှာမရခဲ့သလို ကျွန်မရဲ့ ဆပ်ရမယ့်ဝဋ်ကြွေးဟာ အခုမှ ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်
ချစ်သူဘဝမှာ ကိုယ့်အပေါ်ကြင်နာရုံနဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝရောက်တဲ့အခါလဲ မပြောင်းလဲပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဟာသိပ်ကို မှားသွားတယ် ..
သူအရင္က ကြ်န္္မကို သိ္ပ္ခ်စ္တာ ….
အရင္ကေတာ့ သူကြ်န္မကို သိပ္ခ်စ္တယ္ .. အစစအရာဂရုတစိုက္ရွိတတ္သလုိ စကားလံုးတုိင္းဟာလဲ ခ်ိဳသာတတ္တယ္ သိပ္ၾကည္နူးဖို့ေကာင္းတာပဲ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္မသူ့ကို လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ကြ်န္မ ေဘးနားတစ္သက္လံုး ရွိေနဖို့ေရြးခဲ့တာပါ …
ခ်စ္သူဘ၀ကမွ ကုိယ့္အေပၚမေကာင္းရင္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မွာလဲ ကိုယ့္အေပၚေကာင္းဖို့မေမ်ွာ္လင့္ပါနဲ႕ ဆိုတဲ့စကားေတြကို ကြ်န္မ လက္ခံခဲ့ေပမယ့္လဲ ခ်စ္သူဘ၀မွာေကာင္းရင္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မွာလဲေကာင္းလိမ့္မယ္လို့ထင္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္မ အေတြးေတြ မွားမွန္းသိလာခဲ့တယ္
ေဆးလိပ္အရက္ကြမ္း အကုန္ကင္းခဲ့တဲ့သူမွာ ကြ်န္မတို့လက္ထပ္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ အရက္ေတြေသာက္တတ္လာသလို ကြ်န္မကိုလဲ အရြဲ႕ေတြတုိက္တတ္လာတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲေမးရင္ အေျဖမရွိေတြ ရွိမေနခဲ့ဘူး ကြ်န္မတို့က ခ်စ္လို့ယူခဲ့ၾကတာေလ
ဒါေပမယ့္လဲ အသံမာမာေတာင္ မေျပာတတ္ခဲ့တဲ့သူဟာ ခုဆိုလက္နဲ႕လဲ ရြယ္တတ္ေနျပီျဖစ္သလို ကုိယ္ မၾကိဳက္တာကို ေရွာင္ခဲ့တဲ့သူဟာ ကုိယ္မၾကိဳက္တာေတြကို ပုိလုပ္တတ္လာျပီ အရင္က ကြ်န္မကုိိ သိပ္ခ်စ္ဖူးတယ္ဆိုတာ သူမွ ဟုတ္ရဲ႕လားလုိ့ေတြးေနမိတယ္
အရင္က သူကြ်န္မကုိ သိပ္ခ်စ္ဖူးတာ … ျပႆနာေတြမရွိပါပဲနဲ႕ တျခားတစ္ေယာက္လုိ ပံုစံမ်ိဳးေျပာင္းသြားရတာဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ကြ်န္္မ အေျဖေတြရွာမရခဲ့သလုိ ကြ်န္မရဲ႕ ဆပ္ရမယ့္၀ဋ္ေၾကြးဟာ အခုမွ ေရာက္လာခဲ့တယ္လို့ထင္ပါတယ္
ခ်စ္သူဘ၀မွာ ကိုယ့္အေပၚၾကင္နာရံုနဲ႕ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ေရာက္တဲ့အခါလဲ မေျပာင္းလဲပဲရွိေနလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးဟာသိပ္ကို မွားသြားတယ္ ..